Mirairo yeEuropean inoda nhengo dzenyika kuti vagadzire UBO-rejista UBO inomirira Yekupedzisira Anobatsira Muridzi. Rejista yeUBO ichaiswa muNetherlands muna 2020. Izvi zvinosanganisira kuti kubvira 2020 zvichienda mberi, makambani nemasangano epamutemo anosungirwa kunyoresa varidzi vawo (in) vakananga. Chikamu che data rako reUBO, senge zita uye kufarira hupfumi, zvicha… Read More
Chero kupi kuripwa kukuvadza kusiri-kwezvinhu kwakakonzerwa nerufu kana tsaona kusvika ikozvino kusati kwakafukidzwa nemutemo wehurumende yeDutch. Uku kukuvadza kusiri-kwezvinhu kune kushungurudzika kwehama dzepedyo izvo zvinokonzerwa nechiitiko chekufa kana tsaona yemudiwa wavo iyo imwe bato ichaitirwa chikwereti. Rudzi urwu rwemubhadharo rwunopfuura rwe… Read More
Vanamuzvinabhizinesi vanoshandira vashandi, vanowanzogovana ruzivo rwakavanzika nevashandi ava. Izvi zvinogona kunetsekana neruzivo rwehunyanzvi, sekubika svumbunuro kana algorithm, kana ruzivo rusina hunyanzvi, hwakadai semishumo yevatengi, nzira dzekushambadzira kana zvirongwa zvebhizinesi. Nekudaro, chii chichaitika kune ruzivo urwu kana mushandi wako atanga kushanda kukambani yeanokwikwidza? Unogona kuchengetedza ruzivo urwu? Muzviitiko zvakawanda,… Read More